Fashilka Socdaalkii Rooble ee degaannada Jubbaland | KEYDMEDIA ONLINE
Fashilka Socdaalkii Rooble ee degaannada Jubbaland
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Xil-gaarsiinta Maxamed Xuxeen Rooble ayaa dhowaan socdaal ku tegay maamul Goboleedka Jubbaland, waxaan ujeedka ugu wayn ee socdaalka Rooble daarnaa in xal laga gaaro arrinta Gobolka Gedo, oo ah halka uu salka ku hayo khilaafka Villa Soomaaliya iyo Maamulka Jubbaland.
MUQDISHO, Soomaaliya - Rooble oo u muuqday in uu wakiil uga ahaa Farmaajo arrinta Gedo, islamarkaana uu ku shaqaynayay qodobada uu Farmaajo u soo dhiibay, ayaa maamulka Jubbaland waxa ay hordhigeen dhowr qodob oo ay dalbadeen in la fuliyo si xal loo gaaro, hayeeshee Rooble uu meelna u dhaafi waayay maadaama uusan go’aankeeda lahayn, taas oo qasabtay in socdaalkiisi uu fashil kusoo dhamaado.
Xog ay heshay Keydmedia online, ayaa sheegaysa in kulamadii ee yeesheen Rooble iyo Madaxda Jubbaland waxyaabo badan la isku fahmi waayay, waa-waantii Rooblana ay ku dhamaatay natiijo la’aan.
Waxyaabaha la isku hayo waxaa ka mid ah arrinta dib u heshiisiinta iyo in la qaado ciidamada ay dowladdu gaysay Gobolka Gedo, wararka ayaana sheegaya in Jubbaland ay ka dalbatay Ra’iisul wasaaraha in waxa laga qabto saraakiisha nabad sugida ee Gobolka jooga ee dadka qoraya iyo in la qaado ciidanka dowlada federaalka ay gaysatay Gobolka Gedo , ha yeeshee Rooble uusan arrintaa ka jawaabin.
Jubbalan iyo villa Soomaaliya ayaa u muuqda in uu khilaaf hor leh ka dhex curtay, ayadoo Farmaajo uu dhowaan odayaal iyo saraakiil u daabulay magaalada Garbahaaray ee xarunta Gobolka Gedo, waxaana muuqada in waan-waantii Rooble ay fashil ku soo dhamaatay xalkii la rabana aan laga gaarin, taas oo keentay in Ra’iisul wasaaruhu uu durbadiiba iskaga soo tago Gedo.
Gedo ayaa wajahaysa hubanti la’aan doorasho ayadoo farmaajo iyo Axmed Madoobe ay hardan ugu jiraan sidii midba midka kale uga fara-marooji lahaa 16-ka kursi ee yaala magaalada Garbahaaray.